မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူရန် သတိပေးချက် ၈ ချက် - intouchmedicare
မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူရန် သတိပေးချက် ၈ ချက်
Last updated: 2022-03-25 | 997 ကြည့်ရှုခြင်း |
မိန်းမဂိုလ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် လျှစ်လျှူမရှု့သင့်သောအရေးကြီးသည့်အကြောင်းကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ အများစုသည်ဘာမှမဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းကိစ္စငယ်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆတွေးထင်တတ်ကြပါသည်။ သို့ပေမဲ့ မိမိခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်မဖြစ်သောအချက်များအား သတိမပြုမိပဲ အသေးအမွှားပြဿနာများ၏ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှ ကျန်းမာရေးပြဿနာများအထိပြန့်ပွားလာတတ်ပါသည်။ (သို့) တစ်ခါတစ်ရံ ခန္ဓာကိုယ်မှသတိပေးအချက်ပြမှု့လက္ခဏာများအား ကျွန်ုပ်တို့မှလက်မခံခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူသင့်သည်ဟု သတိပေးသည့်လက္ခဏာအချို့အား အချိန်မနှောင်းမီ လာကြည့်ကြပါစို့။
မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ဆိုသည်မှာ တင်ပါးဆုံအနီးတဝိုက်ရှိအင်္ဂါများအတွင်းပုံမှန်မဖြစ်မှု့များဖြစ်သော မွေးလမ်းကြောင်းဖြစ်စေ၊သားအိမ်ခေါင်းဝအားဖြစ်စေ၊သားအိမ်အားဖြစ်စေ၊သားအိမ်နံရံအားဖြစ်စေ၊သားဥပြွန်အပါအဝင် ဘဲပါးစပ်နှင့်တူသောကိရိယာအား သင့်တော်ကွဲပြားသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် (သို့)မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်းလက်ချောင်းဖြင့်ထိုးသွင်း၍အခြားလက်တစ်ဖက်မှဝမ်းဗိုက်ပေါ်သို့ဖိ၍ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်၄င်း မူမမှန်မှု့များအားစစ်ဆေးရန်အတွက်ဖြစ်ပါသသည်။ထို့နောက် ဆံပင်အားယူ၍ ပုံမှန်မဟုတ်မှု့များအားရှာဖွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ လက္ခဏာမပြတတ်သောရောဂါအများစုအားရှာမတွေ့မချင်း တွေ့အောင်ရှာသည့်အထိစစ်ဆေးခြင်း အစောပိုင်းတွင်တွေ့ရှိပါကအချိန်မီကုသနိုင်သည်။ (သို့) အများဖြစ်နိုင်ခြင်းမှအနည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းသို့သက်သာရာရနိုင်ပါသည်။
မီးယပ်စစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ?
မီးယပ်စစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ သားဥအိမ်၊သားအိမ်ခေါင်း၊သားအိမ်၊သားအိမ်ခေါင်းဝ၊မွေးလမ်းကြောင်း၊မွေးလမ်းကြောင်းအဝ အကယ်၍ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်းအားတွေ့ရှိပါက သင့်တော်သောကုသမှု့အားဆောလျင်စွာချက်ချင်းရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်အခါအလိုက်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) သံသယရှိသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့်လက္ခဏာများပြသောအခါတွင်၄င်း သွားရောက်စစ်ဆေးရန်အကြံပြုပါသည်။ဥပမာ ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းခြင်း၊အနံ့ဆိုးရှိခြင်း၊လိင်အင်္ဂါ၌ယားယံခြင်း (သို့) စပ်ခြင်း ရာသီလာချိန်နည်းခြင်း၊များခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းခြင်းလက္ခဏာသည် ယေဘုယျအားဖြင့်ဂျုံမှုန့်ကဲ့သို့သောအဖြူရောင်ရင့်ရင့် (သို့) ကြည်လင်သောချွဲများပါသည့်အနံ့ဖျော့ဖျော့ရှိခြင်း၊သို့ပေမဲ့ အကယ်၍ပုံမှန်မရှိခြင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါကအနံ့ဆိုးသောအဖြူဆင်းခြင်းမျိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။အကြိတ်အားစမ်းမိခြင်းနှင့် ကွဲပြားသောအရောင်ရှိခြင်း ဥပမာ အစိမ်းရောင်၊ပန်းရောင်၊အဝါရောင် (သို့) အကယ်၍အညိုရောင်ရှိခဲ့ပါက မိန်းမဂိုလ်အတွင်းသွေးထွက်မှု့ရှိခြင်းအားညွှန်ပြနေပါသည်။အချို့သောသူများတွင်ယားယံသောလက္ခဏာများကိုပါတွေ့ရှိရပါသည်။အကယ်၍ ယင်းကဲ့သို့သောပုံမမှန်မှု့များအားတွေ့ရှိခဲ့ပါက ဖြစ်သောအကြောင်းအရင်းအားသိနိုင်ရန်နှင့် ဆက်လက်ကုသရန်အတွက်မိန်းမဂိုလ်အတွင်းသို့သွားရောက်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးရန် (သို့) မီးယပ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းနောက်ထပ်သတိပေးအချက်ပြခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုမှာ မိန်းမဂိုလ်အတွင်းသွေးထွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤအခြေအနေမျိုးတွင် ရာသီလာသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့ပေမဲ့ ရာသီလာပြီးနောက် (သို့) လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ထွက်လာသောသွေးထွက်ခြင်းသည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့်သားအိမ်အတွင်းအကြိတ်ဖြစ်နိုင်ချေများပါသည်။ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရင်းများမှာသောက်ဆေးသုံးခြင်း (သို့) ခန္ဓာကိုယ်၏ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
3. မကြာခဏဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း (ဆီးခုံ) အောင့်ခြင်း
အကယ်၍သင့်၌မကြာခဏဆီးခုံအောင့်ခြင်းမျိုးရှိပါက ရာသီလာချိန်အတွင်း၌ဖြစ်စေ(သို့)အခြားအချိန်များ၌ဖြစ်စေ ပြင်းထန်စွာအောင့်ခြင်းဖြစ်စေ (သို့) ရစ်ရစ်၍အောင့်ခြင်းဖြစ်စေ မိမိ၌ဖြစ်ပေါ်သောအချို့သောအရာများသည် သင်ကိုယ်သင်တစ်ခုခုမှားနေနိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ရှာဖွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် (သို့) မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးထားမှု့များပြုလုပ်ရန်အတွက် အမြန်ဆုံးဆရာဝန်နှင့်သွားတွေ့ထားခြင်းသည်ပို၍သင့်တော်ကောင်းမွန်ပါသည်။
4. ရာသီလာတာ ပုံမှန်မရှိခြင်း
မကြာခဏတွေ့နိုင်သော နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ခုခုမှားနေပြီဟုသတိပေးအချက်ပြမှု့လက္ခဏာများမှာ ရာသီလာတာပုံမှန်မရှိခြင်း၊လာနေကျအချိန်၌မလာခြင်းဖြစ်စေ၊နည်းလာခြင်း (သို့) များလာခြင်းဖြစ်စေသတိပြုသင့်ပါသည်။ (သို့) ရေးမှတ်ထားခြင်းဖြင့်၄င်း အကယ်၍ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်းများတွေ့ရှိပါက ကြာကြာပစ်မထားသင့်ပဲ စစ်ဆေးမှု့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်အမြန်ဆုံးသွားတွေ့သင့်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပျံ့နှံ့မှု့ကြောင့် ရောဂါဆိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
5. ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းအနီးတစ်ဝိုက် (ဆီးခုံ) တွင်အကြိတ်ဖြစ်ခြင်း
ဆရာဝန်မှင့်သွားတွေ့သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း မကြာခဏတွေ့နိုင်သည့် နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းအနီးတစ်ဝိုက်(ဆီးခုံ)တွင်အကြိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။စစ်ဆေးနိုင်သောနည်းလမ်းသည် လဲလျောင်း၍အိပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ထို့နောက် အကြိတ်အဖုအားစမ်း၍တွေ့ရှိ (သို့) မရှိခြင်း မည်မျှမာကြောခြင်း အရွယ်အစားသေးခြင်း (သို့) ကြီးခြင်း အကယ်၍တွေ့ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်အမြန်ဆုံးသွားတွေ့ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
6. မိန်းမဂိုလ်အနီးတစ်ဝိုက်အနာဖြစ်ခြင်း (သို့) ယားစပ်ခြင်း
သတိပြုရန်လွယ်ကူသည့် နောက်ထပ်သိသာထင်ရှားသည့်လက္ခဏာများမှာ မိန်းမဂိုလ်အနီးတစ်ဝိုက်အနာဖြစ်ခြင်း (သို့) ယားစပ်ခြင်းနှင့်အတူရေယုန်ကဲ့သို့သောအရည်ကြည်ဖုများပြန့်ပွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ၊ဘတ်တီးရီးယား၊အီထရိုဂျင်ဟော်မုန်းဓာတ်၏ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောရောဂါများထိဆက်စပ်မှု့ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆီးမှလည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပုံမှန်မဖြစ်မှု့များအားသိမြင်နိုင်ရန်ကူညီပေးပါသည်။အမျိုးသမီးများတွင်မကြာခဏဆီးသွားခြင်းအားတွေ့ရှိပါက (သို့) ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း (ဆီးခုံ) ရစ်အောင့်ခြင်းအပါအဝင်နာကျင်ကိုက်ခဲသော်လည်းဆီးမသွားနိုင်လျှင် မီးယပ်စစ်ဆေးရန်အကြံပြုပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာခြင်းအားအချက်ပြသည့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သဘာဝအားဖြင့် မိန်းမဂိုလ်တွင်အနံ့ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ပုံမှန်မဟုတ်သောအနံ့မျိုးရှိလာလျှင် ဖြစ်လာသောအကြောင်းအရင်းအား အမြန်ဆုံးရှာဖွေစစ်ဆေးပြီး ပြုပြင်သင့်ပါသည်။သန့်ရှင်းမှု့အားနည်းပြီးနှံ့စပ်မှု့မရှိသောကြောင့်ပိုမွှားများစုပုံလာသည်အထိ (သို့) တစ်ခါတစ်ရံ ရောဂါအမျိုးမျိုး၏လက္ခဏာပြမှု့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယားစပ်ခြင်းလက္ခဏာမျိုးပါဝင်လာပါက မိန်းမဂိုလ်အားပို၍ချက်ချင်းသွားရောက်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့သည်ရှက်စရာ (သိုံ) ကြောက်စရာလည်းမဟုတ်ပါ။သို့ပေမဲ့ တွေ့ရှိရသောလက္ခဏာများအား သင့်တော်သလို ကုသနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်သည့်ရောဂါမူမမှန်မှု့များအား ပျံ့နှံ့ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်လာသည်အထိကူးစက်မှု့များအားသိနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးလိုသူများအတွက် အိမ်အနီးနားရှိ Intouch Medicare ဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းတွင်ဝန်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားထပ်မံမေးမြန်းနိုင်ရန်အတွက် သင်နှင့်နီးသောဆေးခန်းအား Google တွင်ရိုက်ရှာခြင်းဖြင့် လမ်းညွှန်ချက်များအား ရယူနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာယုံကြည်စိတ်ချမှု့အားရရှိထားသော စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု့ပေးနိုင်ရန် အထူးကုဆရာဝန်များနှင့်ခေတ်မီသောစက်ကိရိယာများရှိပါသည်။
ตรวจภายใน นรีเวช မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးခြင်း မီးယပ်